SAROKAR: महाकवि देवकोटाकी दिदी थिइन् :
महाकवि देवकोटाकी दिदी थिइन् :
लोकप्रियादेवीको बाल्यकाल बाबुआमाको अपार मायामा बित्यो । उनी सोझी, सरल र इमानदार थिइन् । उनको बानीबेहोराले घरका सबैले उनीप्रति विशेष स्नेह राख्थे । त्यतिमात्र होइन आफ्ना घरमा आउनेजाने र छरछिमेकीले पनि उनलाई बिछट्टै माया गर्थे । उनको बालकलाको धेरैले तारिफ गर्थे किनभने उनका बोलीवचन पनि काव्यात्मक ढाँचाका हुन्थे । यीबाहेक उनी मिलनसार र मायालु स्वभावले भरिएकी नारी थिइन् । सानै उमेरदेखि नै अरूको अड्को पड्को पनि उनी बुझने गर्थिन् ।
त्यस बेलाको नेपाली समाजमा नारीशिक्षाको जागरण प्रारम्भ भएको थिएन । गतिला अभिभावक संरक्षक भएका खण्डमा छोरीलाई घरैमा ठूलो वर्णमालासम्म पढाउने चलन थियो । त्यसैअनुरूप लोकप्रियादेवीलाई पनि घरैमा अक्षरारम्भ गराइएको थियो । यिनले आफ्ना पिताबाटै साधारण लेखपढ गर्न जानेकी थिइन् । साथै त्यस बेला यिनलाई यिनका बुबाले संस्कृतका श्लोक, संस्कृतका सूक्ति र संस्कृतका कथासमेत सुनाउने गर्थे । लोकप्रियादेवीलाई पढ्नमा सारै रुचि थियो । त्यसैले यिनले सानै उमेरदेखि नै आनुपातिक रूपमा धेरै जान्न थालिन् । उमेर बढ्दै जाँदा यिनी साधारण रूपमा पढ्नलेख्न निपुण भइसकेकी थिइन् ।
लोकप्रियादेवी सानामा पनि कविता लेख्ने गर्थिन् । उनलाई कविता लेख्ने प्रेरणा दिने नै स्वयम् उनका बुबा तिलमाधव देवकोटा थिए । घरमा आएका पाहुनापासाका अगाडि लोकप्रियादेवीलाई उभ्याएर कविता वाचन गर्न लगाई तिलमाधवले आफ्नी छोरीलाई थप प्रेरणा दिन्थे । उनी पनि आफ्ना बुबालाई खुसी पार्न कविता लेख्ने गर्थिन् । उनी कहिले प्रकृतिका कविता लेख्थिन्, कहिले जीवनजगत्का कविता लेख्थिन् र कहिलेचाहिँ राष्ट्रप्रेमले ओतप्रोत कविता लेख्थिन् ।
लोकप्रियादेवीको बिहे आठ वर्षो उमेरमा भएको थियो । उनी संवत् १९६३ मा काठमाडौं डिल्लीबजारका लोकनाथ जोशीकी अर्धाङ्गिनीका रूपमा प्रवेश भएकी थिइन् । लोकनाथले नै आफ्नो नाउँको अघिल्लो शब्द 'लोक'मा 'प्रिया' थपेर आफ्नी पत्नीको नाउँ लोकप्रिया राखिदिएका थिए ।
कवितालेखनको सन्दर्भमा कुरा गर्दा लोकप्रियादेवीको बिहेपछि उनलाई उनका भाइ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले कविता लेख्न अभिप्रेरित गरिरहे । त्यतिमात्र होइन लोकप्रियादेवीका कविता पढेर खुसी हुने अर्का व्यक्ति कविशिरोमणि लेखनाथ पौडयाल थिए । त्यस समय पौडयाल लोकप्रियादेवीका घरछेउमा डेरा गरी बस्थे । लोकप्रियादेवीका पतिको आग्रहमा पौड्यालले उनलाई कविताको सिद्धान्त पनि पढाएका थिए । उनले लोकप्रियादेवीलाई कविता लेख्ने कार्यमा घच्घच्याइरहन्थे । साथै चक्रपाणि चालिसेले पनि उनलाई कवितालेखनको मूल्य बताइरहन्थे ।
लोकप्रियादेवी त्यस बेलाकी एउटी चर्चित कवयित्री थिइन् । त्यसताका यिनका सहयोगी नारीस्रष्टाहरू गोमा र प्रेमराजेश्वरी थिए । उनीहरू प्रायः लोकप्रियादेवीका घरमा आउँथे र उनका कविता सुन्ने गर्थे । साथै त्यहाँ उनीहरू पनि आफ्ना कविता सुनाउने गर्थे । लोकप्रियादेवीले कविता सुनाउने काम मात्र गरिनन्; उनले पत्रपत्रिकामा आफ्ना रचना छाप्न पनि इच्छा जाहेर गरिन् । सोहीबमोजिम उनका रचनाहरू पनि पत्रपत्रिकामा छापिने क्रम चलिरहृयो ।
लोकप्रियादेवीको 'शान्तालाई जवाफ' शीर्षकको कविता 'शारदा' (१९९२ फागुन)मा छापियो । त्यति बेला उनका भान्जा देवर प्रेमराज पौडयालले लोकप्रियादेवीका कविता जबर्जस्ती 'शारदा'मा पुर्‍याएका थिए । त्यतिखेर उनका भान्जा कमल दीक्षितले चाहिँ पत्रिकामा छाप्ने लेखरचनाहरू पहिला साफी गरिदिने काम गर्थे । त्यसैताका उनका तीनवटा कविताहरू 'शारदा'मा छापिएका थिए । लोकप्रियादेवीका रचना प्रकाशनको सर्न्दर्भलाई हर्ेदा चक्रपाणि चालिसेले पनि यिनका कविता पत्रपत्रिकामा पुर्‍याइनु पर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्थे । संवत् २००४ मा 'उद्योग' पत्रिकामा यिनको 'दोस्ती' शीर्षकको एउटा कथा छापिएको थियो । त्यस पत्रिकाका सम्पादकमा चक्रपाणि चालिसे र निजका छोरा लक्ष्मीनन्दन चालिसे थिए ।
नेपाली भाषासाहित्यको श्रीवृद्धिमा लोकप्रियादेवीको निक्कै महत्त्व छ । त्यतिखेर साहित्यमा नारीहरूको उपस्थिति प्रायः शून्य रहेको अवस्थामा नारीस्रष्टाको नेतृत्वपङ्क्तिमा उनी उभिएकी थिइन् । वास्तवमा उनी आफ्ना पतिलाई तन, मनले माया गर्थिन् । त्यही परिवेशमा उनले मन, वचन र कर्म समर्पित गरेर आफ्ना पतिलाई कवितामा पनि चिठी लेखिन् । त्यति बेला उनका पतिले जतिसुकै स्वास्नी सोहोरे पनि लोकप्रियाचाहिँ आफ्नो प्रेममय जीवन र त्यही परिवेशको रचनामा नै केन्द्रित थिइन् :
तिमी छौ आँशुकै रूपमा,
हार भनू" कि मोती यहाँ !
जीवनभरको साथी भनूँ या
प्रेममिलनको प्रेमी भनूँ !
साहित्यकी प्रेरक व्यक्तित्व लोकप्रियादेवी त्यस बेलाकी चल्तापूर्जा व्यक्तित्व मानिन्थिन् । सोहीअनुरूप २०१० सालमा मनाइएको भानु जयन्ती समारोह समितिमा यी पनि कार्यकारी सदस्य भएकी थिइन् । वास्तवमा यिनले नेपाली भाषासाहित्यमा जति योगदान दिइन्, धेरै दिइन् । यिनको रुचि र प्रस्तुति नै त्यस युगको एउटा ओजपूर्ण प्राप्ति थियो । त्यस बेला यिनले नेपाली भाषामा रोपेको बिरुवा आज ढकमक्क भई फुलेको छ । लोकप्रियाको इहलीला २०१७ साल जेठ १८ गते मङ्गलबार समाप्त भए तापनि यिनी नेपाली भाषासाहित्यमा सदैव जीवित भइरहिन् र भइरहनेछिन् ।
लोकप्रियादेवी आफ्ना भाइ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई बिछट्टै माया गर्थिन् । त्यसैले उनले आफ्नो भाइको निधनपछि आफ्नो काव्ययात्रा पनि आफ्ना भाइप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरेर बन्द गरिन् । २०१६ सालमा उनले आफ्ना भाइको शोकमा डुबेर 'शोक विन्दु' र 'भाइको अपसोचको आँसु' शीर्षकमा दुइटा कविता लेखिन् । त्यसपछि उनले पुनः कविता लेखिनन् । यिनै कविता नै लोकप्रियादेवीका अन्तिम कविता थिए :
कसरी किन आज के भयो
जगतै यो नरमाइलो भयो
कसरी मन यो बुझाउनु
कसरी आँसु सबै सुकाउनु ?
0 comments: on "महाकवि देवकोटाकी दिदी थिइन् :"